Ekpughere ole RAM ga-enwe iPhone 8, iPhone 8 Plus na iPhone X | Akụkọ akụrụngwa
Ego ole ka iPhone 8, iPhone 8 Plus na iPhone X ga-enwe?
Ruben gallardo | | Apple, Mobiles
Obere obere ihe ijuanya nke Apple kwadebere maka echi na-akọwacha September 12. Ma nke ahụ bụ na nsị nke iOS 11 GM version abụrụla igbe akụ ebe ị nwere ike nweta ọtụtụ ozi gbasara ụdị iPhone ndị ọzọ. Nke ikpeazu leaked ọmụma na-ezo aka ego nke RAM na ọhụrụ ụdị ga-enwe.
Cheta na, ọ bụrụ na nkwụsị ahụ na-aga nke ọma, anyị ga-enwe ụdị ọhụrụ 3. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị na-ama mara na Apple ga-amali ezi uche evolushọn nke afọ ọ bụla na nzọ na a ọhụrụ nọmba: iPhone 8 na iPhone 8 Plus. Modelsdị ndị a ga-abụ "ntinye ntinye" ma dochie ụdị ndị dị ugbu a. O doro anya na nsụgharị abụọ a ga-enwe ihuenyo LCD. Ka ọ dị ugbu a, ihe nlereanya nke na-echeta afọ 10 kemgbe mmalite nke iPhone mbụ. Nke a ga-ana baptism dị ka iPhone X na nzọ na ngalaba AMOLED na teknụzụ Ezi oneda dị ka nke ị nwere ike ịnụ ụtọ na iPad Pro nke na-enweta nyocha dị mma.
Ma e wezụga inwe ike ịgụta nwere nchekwa ndị ruru 512 GB -Lee na ọnụ ọgụgụ-, ego nke RAM nke ụdị atọ ahụ ga-eji edozi site na onye nrụpụta nke ụlọ ọrụ ahụ. Na nwute, a gaghị enwe ihe ịtụnanya na nke a. Ọ dị ka, iPhone 8 ga - enwe 2 GB nke RAM; ihe iPhone 8 Plus na iPhone X ga-nzọ na 3 GB Ebe nchekwa RAM. Iji nye gị echiche, ọnụ ọgụgụ ndị a kwekọrọ na nke anyị nwere ike ịchọta na nke ugbu a iPhone 7 (2 GB) na iPhone 7 Plus (3 GB).
Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na anyị atụnyere ọnụ ọgụgụ RAM ndị a na ụdị dị elu na gam akporo, Apple na-aga n'ihu na-efu. Mana ọ bụkwa eziokwu na arụmọrụ nke iOS na kọmputa ndị a - yana nkọwapụta teknụzụ ndị a - na-eme arụ ọrụ dị ire ụtọ ọ dịghịkwa mkpa karịa karịa ka ọ dị na mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ego ole ka iPhone 8, iPhone 8 Plus na iPhone X ga-enwe?
Ihe ohuru nke Xiaomi Mi MIX 2 bu onye ochichi ma bia n’iru iguzogide ogwe aka obula na ahia
IPhone X agaghị abịa naanị ya na Apple Watch Series 3 ga-abụ eziokwu echi